Otu esi ewepu mealybug na osisi ime ụlọ, ụdị - Osisi - 2020
Mealybug: ihe na - akpata pesti na usoro nke njikwa
Powdery mealybug ma ọ bụ ajị anụ nwere bụ ọgwụ na-egbu egbu nke na-emetụta ọtụtụ ụdị osisi. Nke a bụ aha a na-ahụkarị maka ụmụ ahụhụ site na iwu Koktsid, ezigbo ndị ikwu nke ụmụ ahụhụ n'ogige.
Enwere ike ịchọta ezumike n'ogige ahụ na mkpụrụ osisi na osisi, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe nchekwa ihe nkiri, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ na n'ụlọ n'ụlọ osisi.
Mealybug ma ọ bụ shaggy louse na-emetụta:
mgbọrọgwụ na ụlọ citrus na violet;
akwụkwọ ndụ nke dracaena - efere na-amị amị, daa;
na orchid - buds, akwụkwọ ifuru;
osisi ego - kpuchie ogwe osisi na-acha ọcha.
Monstera, fuchsia, croton, camellia, anthurium, ọtụtụ ụdị nke ụlọ ụlọ ka ebe obibi na ịmụpụta ikpuru. A na-emegide ifuru, a na-akụghasị usoro photosynthesis.
Nkọwa nke Mealybug
Kokoro nwere aha di ọcha n’elu aru dika aru ma obu bristles, o ghaputara naani na ụmụ ahụhụ. N'ime ụwa, enwere ụdị ikpuru karịrị puku abụọ na-aba site na 500 microns ruo 12 mm. Ebe obibi nke ụmụ ahụhụ dị ukwuu, ha bi n'ọnọdụ ọ bụla.
Mmebi nke okooko osisi dị n'ime ụlọ, osisi mkpụrụ osisi, ihe ọkụkụ ụlọ ọrụ na-akpata nke ụmụ nwanyị na larvae. Ha na-ackụ ihe ọ juụ juụ sitere na mkpọrọgwụ ma ọ bụ akụkụ ala nke ahịhịa ahụ, na-egbochi mmepe zuru oke, na-edugakarị ọnwụ.
Mụ nwoke adịghị emerụ ahụ, ha enweghị ọnụ, n'ọdịdị, ha yiri anwụnta “pọpụpọ”. Femụ nwanyị dị larịị, dị nro, oval nwere ụdị isi, obi na afọ dị iche.
Pests na-agafe mmiri ihe ọ plantụ plantụ na osisi onwe ha site na mmanụ a honeyụ nke igirigi mmiri nke na-eme ka ero ndị na-adị ụtọ ala nwee ike ịzụlite. N'ihi igirigi nke ikpuru, ndanda na-ahụ ha n'anya, ha na-ebuga ha na osisi, ha na-echebe ogige ahụ pụọ na ụmụ ahụhụ na-eri anụ.
N'ime ubi mkpụrụ osisi, ahụhụ na-ezo n'ọhịa mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi nke osisi ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ na-eji nwayọ anabata ọnọdụ okpomọkụ ruo -15 Celsius. Ọ na-arụ ọrụ n'oge opupu ihe ubi.
Propagation na mmepe nke mealybugs
Ofdị ikpuru a na-ahụ n'ime ahịhịa dị n'ime ụlọ, na ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-enwe ike ịmụpụta n'enweghị ụmụ nwoke na-efe efe. N'ime otu afọ, ụmụ nwanyị na - eme site na 2 ruo 4, n'ime nke àkwá dị site na akwa 300 ruo puku abụọ. Site na ọmụmụ dị otú ahụ, ha na-anọdụ ala ifuru ngwa ngwa. Mealybug ozuzu
Mealybugs na-akọpụta ihe ọkụkụ na-ahọrọ ala na-eme nri mma. Ndi nke nwanyi adighi adi ike, kwagharia ebe ozo ma o buru na mgba nke nzoputa ya na umu aka malitere. Ha dị mfe ịchọta site na friji ọcha - eriri na-acha ọcha nke akwụkwụ ahụ.
Nwanyi na –eme ka ekpughere ya n’ime akpukpo ahihia site na nzipu ya - akpa nke okirikiri ma obu n’aho ovu, kegide na axils nke akwukwo ma obu n’etiti udiri azu nke akwukwo. Ngwurugwu nke okpukpo kporo oku ghapuru mmiri nke oma, ma mee ka ikuku gabiga. Àkwá na-agbanwe agbanwe, nweekwa ihe ndị dị n'ime ya, na-acha ọcha na mpụga. Ha gbara gburugburu ma ọ bụ n'ụdị nke el.
Mgbe ụbọchị 5-10 gachara, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ mkpụchaghị otu niile. Naanị n ’okpomoku dị ala ka ụfọdụ àkwá na-anwụ. Larvae dị mkpanaka, ha anaghị anwụ anwụ. O siri ike obibi ha. Ha na-ahapụ igbe ahụ ngwa ngwa, na-agbasa n'ime ihe ọkụkụ ahụ. Maka igwu egwu, a na-akpọ larvae a "tramps," ụzọ abụọ ụkwụ na-agagharị mgbe nile. Ọ bụ naanị n'oge a na-emegharị mmadụ ka mmadụ na-ajụ. Light na-eto eto pests drafts zigara ya na okooko osisi ndị ọzọ. Ha na-emeghari ngwa ngwa n’ebe ọhụrụ. N'ịbụ ndị tozuru oke, ụmụ nwanyị na-efu ọrụ ha, ụkwụ na-apụ n'anya n'ụdị ụfọdụ.
A na - ahụta ụdị atọ dị ka ahụhụ dị ka ihe kachasị ike ma sie ike ikpochapụ. Banyere ịkọwa nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ha apụta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ifuru ime ụlọ - ọ dị ngwa ngwa ịgwọ ihe ọkụkụ na ahịhịa griin haus.
Eruo iru ahuhu nke udiri a di otu ntolite. Mamụ nwanyị n'ụdị ọdịdị oval siri ike ruru mm 3.5. Ahụ nwere ụkwụ abụọ n'ụkwụ bụ oroma ma ọ bụ pink pink. Ọgwụgwọ osisi sitere na ụmụ ahụhụ dị nhịahụ n'ihi njiri agbụrụ nke ụdị ya. Ivmụ nwanyị dị elu na-ebi na mpempe akwụkwọ nke obere, n'ebe ndị zoro ezo nke akpati ahụ.
Mamụ nwanyị na-akpụzi alaeze ngwa ngwa, na-egbochi mmepe nke osisi, na-eduga ya n'ọnwụ. Na ọdịbendị bulbous, a na-emetụta mkpọrọgwụ ahụ, na-eri ihe dị n'etiti akụkụ bọlbụ ahụ. Can nwere ike ichoputa ikpuru nke bristle site na ịchacha ahịhịa, igirigi mmanụ a honeyụ, mmepe nke fungus fungus - ọ na-etolite agba aja aja ma ọ bụ oji ojii nke nha dịgasị iche iche.
Agba aja aja na-acha aja aja ma ọ bụ nke pink na-acha aja aja nke ikpuru dị obosara, na-agbanye mkpuchi na-acha ọcha. Ndi nwoke ka nwanyi n’aru, ndi ahu di ole ma ole, ha na ewepu osisi obula.
Larvae na-ahọrọ imechi ụdọ enyemaka ahụ, ọ dị mfe ịnweta nri ndị ahụ. Masonry na-etolite n'etiti akwụkwọ na-eto eto na-enweghị isi. N'elu Ome ahụ, a na-ahụkarị obere eriri n'ụdị ajị anụ.
Maka mmụba nke ọnụ ọgụgụ buru ibu, achọrọ iru mmiri adịghị elu karịa 75%, okpomọkụ n'ime + 22 ... +25 ° С. Ọ bụ ihe amamihe dị na ị na-ebugharị ahịhịa ndị metụtara ụlọ n'oge ọgwụgwọ site na mealybug gaa ebe dị jụụ, kewapụ ha na osisi ndị ọzọ.
Msdị ikpuru a na-ahụkarị dị ka osikapa eresịrị site na mbadamba ihu, ụzọ atọ na obere usoro ntutu. Maka ịtọ, ụmụ nwanyị na-akpa akpa akwa, na-eme ka ha sie ike:
na mpempe akwụkwọ;
na ngwa ngwa nke cortex;
na ntọala nke petiole;
n'etiti akwukwo nke ome odo.
Mgbe mbụ molt, ụmụ nwanyị na-eto eto nwere ike dina 50 àkwá n'oge uto. Ruo mgbe o tozuru oke, ihe mealybug chọrọ ruo otu ọnwa. N'ime njide nke okenye, enwere ihe ruru narị isii. Larvae na-agbasa ngwa ngwa n'ihe ọkụkụ ahụ niile, na ala ndị dị larịị, ha na-ejide akụkụ mgbọrọgwụ.
N'oge ara na molting na-emegharị. A na - emepụta igirigi mmanụ a volụ n'ọtụtụ - nri ụtọ nke obere ndanda ojii. Mgbe ụmụ ahụhụ ndị a pụtara n'osisi mkpụrụ osisi ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme ọgwụgwọ ncha mgbochi nke ebe ebe mealybugs nwere akwụ.
Ihe ịrịba ama nke mebiri osisi site na mealybug
Ihe ịrịba ama nke mmebi ahụhụ:
mkpịsị akwụkwọ na-eto eto na ome;
anwụnta ndị dị na windo ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ obibi;
whitecha ọcha kpuchie n’elu ogwe, eriri “ajị anụ”;
ihe nnyapade n’elu akwa mpempe akwụkwọ;
ụmụ ahụhụ na-acha ọcha na ala, na-achọpụta site na ịmịnye ma ọ bụ tọpụ ala.
Mezọ nke Mealyworm
Na ihe ịrịba ama mbụ nke nje, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgwọ osisi ndị emetụtara, na-eji usoro ndị ọzọ, nwalee oge. Ebe enwere ụmụ ahụhụ dị ukwuu, a na-ebido “ogbugbu” dị arọ, a na-eji ọgwụ nje. Njikwa mealyworm
A na-eji ahịhịa dị nro kpochaa osisi ndị ọ metụtara. Wepu akwa mkpuchi, nsị nke akwa sacs. Ọ dị mfe iwepụ ahụhụ tupu ogige ahụ etolite.
A na-eji ncha ncha na-asa ifuru ime ụlọ na ahịhịa griin haus, 15 g nke ịsa akwa ma ọ bụ ncha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-agbanye na otu lita mmiri.
Wepu akwa siri ike wepu akwa di nro ma obu akwa.
Ahịhịa tincture adịghị mma maka a beesụ: 5 cloves nke ọkara nke wunye 0,5 l nke esi mmiri, kechie maka awa 6. Nwee, hichaa ahịhịa niile nke ọma.
Emulsions dabere na mmanụ oriri ọ bụla bụ ihe dị mma dị nro. Iji 0,5 lita mmiri tinye 1 tbsp. ngaji mmanu mmanu.
Tincture nke horsetail a na-eme na mmiri ịsa ahụ maka nkeji 20. A na-etinye 1 teaspoon nke akụrụngwa akọrọ na iko mmiri ọkụ.
Ngwakọta nke citrus zest na-eme na ọnụego 15 g nke mkpụrụ ọka a mịrị amị a na-egbu egbu (Art. Ngaji nwere ugwu) kwa liter nke esi mmiri. Mgbe ikpochasịrị, a na-agbanwe ihe edozi.
Emere ma ọ bụ fesaa ya na ihe nchekwa nchekwa ndụ n'ụzọ atọ, ụbọchị ise ọ bụla. Karịsịa ngwangwa bụ larvae ọhụrụ hatched. Ọkpụkpụ n'ọnụ ha na-emetụta ya, ha enweghị ike iri nri, ịnwụ anwụ, daa n'ụkwụ ma ọ bụ ị ga.
Dika ntule nke ndi na ako ahihia, na ulo, site na otutu ihe eji eme ihe eji eme nri ahihia na ahihia, o kacha mma iji Aktara, Fitoverm Forto. Fesa ifuru ugboro abụọ n'ọnwa ruo mgbe ihe ncheta ahu kpamkpam.
A na-eme nkwadebe ndị ahụ na mmanụ, ha na-agbatị nke ọma na akwụkwọ. A na-etinye ọgwụ ahụ na ala mpempe akwụkwọ ọ bụla na egbe. A na-dil dil nke na-arụ ọrụ dịka ntuziaka ahụ si dị. Ọ dị mkpa iji lelee usoro nchekwa, jiri akụrụngwa nchebe onwe gị.
Maazị Dachnik na-adụ ọdụ: mgbochi ọrịa site na iji mealybug
Ihe isi ike na nchịkwa pesti na-ebilite mgbe ọ dị ihe ọkụkụ na imebi ahịhịa.
Ọ bụrụ na a na-eme ala mmiri oge niile, na-ebelata oge ịgba mmiri, na-abawanye iru mmiri ikuku n'oge oyi, mgbe kpo oku etiti na-agba, a ga-ebelata ihe ize ndụ nke mmebi ifuru.
Mgbe ị na-enye nri, ọ dị mkpa ịlele nha.
Nitrogenmeju nri fatịlaịza na-emetụta ihe ọkụkụ; ọrụ nchebe ha sitere n'okike na-ebelata.
Ọ dị mkpa mgbe niile iwebata isi ihe dị mkpa: potassium, calcium, site. Osisi na-eku ume akwụkwọ ndụ, ọ dị mkpa iji wepu ájá sitere na ha n'oge kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya idobe ma ọ bụ nweta ifuru ahụ n'izu ndị mbụ mbụ na-anọpụ iche ruo mgbe enwere nkwenye siri ike na enweghi nje na ya. Site na idebe usoro mgbochi, teknụzụ ugbo kwesịrị ekwesị ekwesịghị atụ maka ọkụkụ ụlọ. Mealybugs na-ahọrọ iji akwụkwọ ahịhịa juru uro lụsoo ọgụ.